ဝတ်ဖို့ဒ်နဲ့ပွဲကို ရာနှုန်းပြည့်ကစားပြီး မျှမျှတတလုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ အာတီတာပြော - Arsenal Myanmar News
ဝတ်ဖို့ဒ်နဲ့ပွဲကို ရာနှုန်းပြည့်ကစားပြီး မျှမျှတတလုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ အာတီတာပြော
အာဆင်နယ်နည်းပြ မီခယ်လ် အာတီတာက သူတို့အနေနဲ့ အမှတ်ပေးဇယားကနေတစ်ဆင့် ယူရိုပါလိဂ်ကို မဝင်နိုင်တော့ချိန်မှာ လေ့ကျင့်ကွင်းက အိမ်နီးချင်းဖြစ်တဲ့ ဝတ်ဖို့ဒ်ကို လျှော့ကန်ပြီး တခြားတန်းဆင်းဇုန် ရုန်းနေရတဲ့ အသင်းတွေအပေါ် သစ္စာဖောက်တဲ့ အပြုအမူမျိုး မလုပ်ဘဲ ကစားသွားရမယ်လို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
ဝတ်ဖို့ဒ်အသင်းအနေနဲ့ အာဆင်နယ်ကို အမ်းမရိတ်မှာ အနိုင်ယူခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဗာတန်ကို ဂွတ်ဒီဆန်ပါ့ခ်မှာ ရင်ဆိုင်ရမယ့် အက်စ်တန်ဗီလာကို အသာစီးရယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး သူတို့နှစ်သင်းစလုံးရှုံးပြီး ဘုန်းမောက်တို့ နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အခြေအနေတွေက တစ်မျိုးတစ်မည် ပြောင်းလဲသွားဖို့ ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ မနှစ်က ယူရိုပါလိဂ်ဖိုင်နယ်မှာ ဒဏ်ရာတွေ ပေးသွားခဲ့တဲ့ မြို့ခံပြိုင်ဘက် ချဲလ်ဆီးနဲ့ ကစားရမယ့် ဝင်ဘလီကွင်းက အက်ဖ်အေဖလား ဗိုလ်လုပွဲအတွက် အာရုံစိုက်ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ ဝတ်ဖို့ဒ်နဲ့ ရာသီပိတ်ပွဲစဉ်အတွက် ခန့်မှန်းမှုနဲ့ ထင်ကြေးအမျိုးမျိုး ပေါ်ထွက်နေချိန်မှာ အာတီတာက ခုလိုပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တာဝန်သိစိတ်ရှိသင့်ပြီး ဒီပွဲရဲ့ ရလဒ်ဟာ တခြားအသင်းတွေအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မလဲဆိုတာကိုလည်း သိထားရမှာပါ။ ဒါဟာ ပွဲတိုင်းမှာ လုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်အသင်းရဲ့ ရလဒ်အတွက်ကိုယ် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း မပေးဆပ်ဘဲ လျှော့ပေါ့ပြီး ကစားခဲ့မယ်ဆိုရင် ပြဿနာရှိတဲ့ကိစ္စပဲ ဖြစ်ပါတယ်”လို့ အာတီတာက ဆိုပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
ဒါ့အပြင် အာတီတာက ဝတ်ဖို့ဒ်နဲ့ပွဲမှာ ခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့သူတွေကို အက်ဖ်အေလားဖိုင်နယ်အတွက် ထည့်သွင်းရွေးချယ်သွားမယ်လို့ ပြောလိုက်ပြီး အသင်းရဲ့ အစဉ်အလာကြီးတဲ့ ဖလားအတွက် ကစားရာမှာ အကောင်းဆုံး ခံယူချက်နဲ့အတူ ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ ပုံစံကောင်းရရှိနေသူတွေကို အဓိက အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောကြားသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
UNICODE: အာဆငျနယျနညျးပွ မီခယျလျ အာတီတာက သူတို့အနနေဲ့ အမှတျပေးဇယားကနတေဈဆငျ့ ယူရိုပါလိဂျကို မဝငျနိုငျတော့ခြိနျမှာ လကေ့ငျြ့ကှငျးက အိမျနီးခငျြးဖွဈတဲ့ ဝတျဖို့ဒျကို လြှော့ကနျပွီး တခွားတနျးဆငျးဇုနျ ရုနျးနရေတဲ့ အသငျးတှအေပျေါ သစ်စာဖောကျတဲ့ အပွုအမူမြိုး မလုပျဘဲ ကစားသှားရမယျလို့ ပွောကွားလိုကျပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
ဝတျဖို့ဒျအသငျးအနနေဲ့ အာဆငျနယျကို အမျးမရိတျမှာ အနိုငျယူခဲ့မယျဆိုရငျ အဲဗာတနျကို ဂှတျဒီဆနျပါ့ချမှာ ရငျဆိုငျရမယျ့ အကျဈတနျဗီလာကို အသာစီးရယူနိုငျမှာဖွဈပွီး သူတို့နှဈသငျးစလုံးရှုံးပွီး ဘုနျးမောကျတို့ နိုငျခဲ့မယျဆိုရငျ အခွအေနတှေကေ တဈမြိုးတဈမညျ ပွောငျးလဲသှားဖို့ ရှိနတောလညျးဖွဈပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
အာဆငျနယျအသငျးအနနေဲ့ မနှဈက ယူရိုပါလိဂျဖိုငျနယျမှာ ဒဏျရာတှေ ပေးသှားခဲ့တဲ့ မွို့ခံပွိုငျဘကျ ခြဲလျဆီးနဲ့ ကစားရမယျ့ ဝငျဘလီကှငျးက အကျဖျအဖေလား ဗိုလျလုပှဲအတှကျ အာရုံစိုကျပွငျဆငျနခြေိနျမှာ ဝတျဖို့ဒျနဲ့ ရာသီပိတျပှဲစဉျအတှကျ ခနျ့မှနျးမှုနဲ့ ထငျကွေးအမြိုးမြိုး ပျေါထှကျနခြေိနျမှာ အာတီတာက ခုလိုပွောကွားလိုကျတာလညျးဖွဈပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
“ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ တာဝနျသိစိတျရှိသငျ့ပွီး ဒီပှဲရဲ့ ရလဒျဟာ တခွားအသငျးတှအေပျေါ ဘယျလိုသကျရောကျမလဲဆိုတာကိုလညျး သိထားရမှာပါ။ ဒါဟာ ပှဲတိုငျးမှာ လုပျဆောငျရမယျ့အလုပျဖွဈပွီး ကိုယျ့အသငျးရဲ့ ရလဒျအတှကျကိုယျ ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျး မပေးဆပျဘဲ လြှော့ပေါ့ပွီး ကစားခဲ့မယျဆိုရငျ ပွဿနာရှိတဲ့ကိစ်စပဲ ဖွဈပါတယျ”လို့ အာတီတာက ဆိုပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
ဒါ့အပွငျ အာတီတာက ဝတျဖို့ဒျနဲ့ပှဲမှာ ခွစှေမျးပွနိုငျတဲ့သူတှကေို အကျဖျအလေားဖိုငျနယျအတှကျ ထညျ့သှငျးရှေးခယျြသှားမယျလို့ ပွောလိုကျပွီး အသငျးရဲ့ အစဉျအလာကွီးတဲ့ ဖလားအတှကျ ကစားရာမှာ အကောငျးဆုံး ခံယူခကျြနဲ့အတူ ကွံ့ခိုငျမှုနဲ့ ပုံစံကောငျးရရှိနသေူတှကေို အဓိက အသုံးပွုသှားမှာဖွဈတယျလို့လညျး ပွောကွားသှားခဲ့ကွောငျး သိရှိရပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
By AM Author| 2020-07-24T04:00:00+00:00	July 24th, 2020|News|Comments Off on ဝတ်ဖို့ဒ်နဲ့ပွဲကို ရာနှုန်းပြည့်ကစားပြီး မျှမျှတတလုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ အာတီတာပြော